Fiainana vaovao - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-02 > Life vaovao
Amin'ny lohataona dia mahafinaritra ahy ny mahatsapa hoe ahoana ny herin'ny voninkazo na ny oram-panala- mavaratra dia matanjaka ary tsy mihetsika amin'ny alàlan'ny oram-panala mankany amin'ny hazavana izy ireo. Volana vitsivitsy talohan'izay, dia nambolena toy ny lohalika kely izy ireo ao anaty tany ary mahazo fiainana vaovao izy ireo amin'ny ampahany amin'ny famoronana.
Ny zavatra iainanao amin'ny alàlan'ny fahagagana famoronana dia tandindon'ny fihoaran'ny fiainanao lalina kokoa. Hatramin'ny andro voalohany, ny fiainanao ara-batana dia ampitahaina amin'ny fivoaran'ny voninkazo mahafinaritra iray amin'ny baomba. Ny fanontaniana ankehitriny dia hoe: sehatra inona ianao izao amin'izao fotoana izao?
Na izany na tsy izany, amin’ny toe-javatra rehetra eo amin’ny fiainanao dia afaka mahazo antoka tanteraka ianao fa tia anao ilay Mpamorona tsitoha ary sarobidy lavitra noho ny voninkazo tsara tarehy indrindra ianao eo imasony. "Nahoana no manahy ny amin'ny fitafiana ianareo? Jereo ny fanirin'ny lilia any an-tsaha: tsy miasa na mamoly ireny. Lazaiko aminareo fa na dia Solomona tao amin'ny voninahiny rehetra aza dia tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny." Matthew 6,28- iray).
Ankoatr'izay, manome toky anao i Jesosy fa hanome azy fiainana vaovao ianao raha mino azy. Ary tsy ho an'ny voninkazo fohy fotsinyny fotoana, fa ny mandrakizay.
Ny zavatra tsara indrindra momba an'io fampitahana io dia ny ohatra nomen'i Jesosy. Niaina fiainana tsy misy ota Izy ary nanolotra izany ho anao sy izaho ho mpanota mba hahafahantsika mizara amin'ny fiainany mandrakizay. Jesosy dia nanokatra ny lalana ho antsika amin'ny fijaliany, ny fahafatesany ary ny nitsanganany tamin'ny maty. Entiny avy amin'ny fiainana ara-nofo mankany amin'ny fiainana vaovao sy fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjakany aho.
Mino aho fa tena fifaliana io fahamarinana io. Izy io dia mafy toy ny masoandro eo amin'ny sarony mandrakotra, izay manalefaka ny lanezy. Alao an-tsaina hoe i Jesosy, ilay mpanompo lehibe indrindra amin'ny famoronana vaovao, dia te hizara fiainana aminao. Mirary anao ho vanim-potoanan'ny Paska amin'ny herin'ny fiainana vaovao ao amin'i Jesosy Kristy